Xaaladda Tripoli oo walaac laga muujinayo - BBC Somali
Xaaladda Tripoli oo walaac laga muujinayo
27 Agoosto 2011
Image caption Isbataallada Libya oo dhaawac badan la keenayo
Britain ayaa sheegtay inay daawo iyo raashin u direyso Libya, halkaasi oo gargaar bini'aadanimo si degdeg ah loogu baahan yahay, iyadoo mucaaradka ay baadigoobayaan sidii ay ugu danbeyn ku ridi lahaayeen hogaamiyaha baxsadka ah Colonel Gaddaafi.
Dowladda Britain ayaa sheegtay inay lacag siineyso hey'adda Laanqeyrta Cas si ay u diraan kooxo caafimaad oo dhinaca qalliinka ah, kuwaasi oo daweyn doona shan kun oo qof oo ku dhaawacmay dagaalka iyo raashin ku dhawaad 700 kun oo qof la siinayo.
Dhinaca kale, dayaaradaha dagaalka ee NATO ayaa weeraro xalay kuq aaday magaalada Tripoli iyo magaalada Gadaafi uu ku dhashay ee Sirta, halkaasi oo la aaminsan yahay inay tahay meesha ugu danbeysa ee wali uu ku sii xoogan yahay.
Afhayeen u hadlay NATO ayaa sheegay in ay ka heleen Tripoli qalab iyo baabuur militeri, iyo fadhiga gantaallada laga rid, inkastoo ciidamada daacadda u ah Gaddaafi loo riixay dhinaca koonfureed, laakiin weli waxa ay heystaan magaalada Sirta.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki Moon, ayaa hogaamiyayaasha caalamka kula kulmay shir dhinaca Video-ga ah, dadaal lagu doonayo in lagu qabanqaabiyo beesha caalamka qaabkii ay uga jawaabi lahayd kadib marka uu Gadaafi meesha ka baxo.